နှုတ်ကြောင့်သေ လက်ကြောင့်ကြေဆိုသလို – Internet Bawdar
Posted on December 12, 2018 September 11, 2020
အပိုင်း ၈။ နှုတ်ကြောင့်သေ လက်ကြောင့်ကြေဆိုသလို
မောင်မယ်တို့ရေ လူမှုကွန်ရက်ဆိုတာ တစ်ချိန်တည်းမှာ ကိုယ့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကို ကိုယ့်အကြောင်းတွေ အလွယ်တကူ ပြောပြနိုင်အောင်လို့ ပြုလုပ်ထားပေးတဲ့အတွက် လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတုန့်ပြန့်တာတွေ အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့တစ်ချို့ကိစ္စတွေက လူတွေသိသင့်တဲ့ အရာင်္တွေရှိသလို တစ်ချို့ကိစ္စတွေက နှုတ်ကြောင့်သေ လက်ကြောင့်ကြေ ဆိုသလိုမျိုး ကိုယ့်အန္တရာယ်ကျရောက်မယ့်အရာတွေကိုတော့ လူမှုကွန်ရက်မှာ မဝေမျှသင့်ပါဘူး။
တစ်ခါတစ်လေကျရင် ကိုယ့်ကိုလူအထင်ကြီးမယ့်အကြောင်းတွေကို လူတွေက တင်ချင်လေ့ရှိတာက သိပ်အကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေကြတော့ ကိုယ်သိပ်ကြွားလွန်းရာကနေ အန္တရာယ်ကို ဖိတ်ခေါ်သလိုမျိုး မထင်မှတ်ပဲ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။​ ကိုယ့်အကြောင်းကို လူတိုင်း ထဲထဲဝင်ဝင်သိသွားစေမယ့် အချက်အလက်တွေဆိုတာက ဥပမာ – ကိုယ့်မှာပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိတယ်၊ ဘယ်လောက်လခထုတ်လာတယ်၊ ကိုယ်ဘယ်မှာနေတယ်၊ ကိုယ်ဘယ်အချိန်အိမ်ပြန်လေ့ရှိတယ်၊ ပိတ်ရက်တွေဆို ဘယ်တွေသွားလေ့ရှိတယ် ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့လေ့ရှိတယ် ဆိုတာတွေကို status အဖြစ်တင်နေတာက ကိုယ့်အကြောင်းတွေကို လူအများသိအောင် share မိနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် status တင်မယ်ဆိုရင် သေချာစဉ်းစားပြီးမှ တင်ဖို့ကတော့ အရေးကြီးပါတယ်။
နောက်ပြီး ပိုအန္တရာယ်ရှိတာက ကိုယ်ဘဏ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိတာ၊ ရွှေတွေဘယ်လောက်ရှိတာ၊ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းဘယ်လောက်ရှိတာကို ထုတ်ပြတာမျိုးပေါ့။ အရေးကြီးဆုံးက ကိုယ့်အားနည်းချက်လို ဖြစ်မယ့်အရာတွေကို လူတွေမြင်အောင် ထုတ်ဖော်ပြတာက အန္တရာယ်ကို ဖိတ်ခေါ်တာပဲ။​
တစ်ခု မှတ်မိထားရမှာက ကိုယ်တင်တာကို မြင်နိုင်တဲ့သူတွေကို ကန့်သတ်ထားတာမရှိရင် လူတိုင်းမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာပဲ။ ဘ​ယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲဆိုတာကို နောက်ကျရင်ဆက်ပြောပြမယ်။ ကိုယ်က ကိုယ့်ကွန်ရက်ထဲမှာ ဘယ်သူတွေရှိနေတယ်ဆို အကုန်မမှတ်မိသလို ဘယ်သူတွေက ကိုယ့်တင်သမျှတွေကို မြင်နေမလဲဆိုတာကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးလေ။ အဲ့တော့ အစကတည်းက ကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဒီလိုကိစ္စတွေကိုမပြောတာက ဘေးအကင်းဆုံးပေါ့။
Google Drive ကို အကျိုး ရှိရှိသုံးကြမယ်။
စာတွေရေးပြီး ဘယ်မှာသိမ်းလို့သိမ်းထားရမှန်းမသိပဲ ရှုပ်နေတာမျိုးရှိလား အခုလို covid ကာလမှာ အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာအသုံးများတဲ့ Google Drive နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Google Drive မှာဆိုရင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲဘဲဖြစ်ဖြစ် ရေးထားတဲ့စာတွေကို သေသေသပ်သပ် မ​ပျောက်မပျက်သိမ်းထားလို့ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင်
Campaign တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘာတွေလိုမလဲ?Campaign ဆိုတာဘာလဲ?
Campaign တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘာတွေလိုမလဲ? Campaign ဆိုတာဘာလဲ? Campaign ဆိုတာ ကိုယ်ယုံကြည်ရာအအကြောင်းတစ်ခုခုကို စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးပြုလုပ်တာကို Campaign လို့ခေါ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း လူမှုကွန်ယက်မှာဆိုရင် ဘော်ဒါတို့နဲ့လည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Campaign တွေကိုတွေ့မိမယ်ထင်တယ်နော်။ ဥပမာ “SaveIrrwaddyDolphins” တို့ “JusticeForVictoria”
ဘော်ဒါတို့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို ပိုလှပိုကြည့်လို့ကောင်းအောင် ဘယ်လိုပြင်ကြမလဲ? ပုံရဲ့background ကိုလည်းပိုပြီးစိမ်းစိမ်းစိုစိုဖြစ်စေချင်တာမျိုးဆို ဘော်ဒါတို့ လိုချင်တဲ့အတိုင်းရအောင် ဘယ်မှာသွားပြင်ကြမလဲ စတဲ့ ဓာတ်ပုံပြင်နည်းလေးတွေ အလွယ်တကူ လုပ်လို့ရတဲ့ ၊ အခမဲ့ပုံပြင်လို့ရတဲ့ applications တွေအများကြီးထဲကမှ Snapseed Application
VPN နဲ့ပတ်သတ်လို့ အချက်သုံးချက်ကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ VPN ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်အရေးကြီးလည်းနဲ့ ဘာကြောင့် VPN ရှိသင့်လဲဆိုတာတွေကိုဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ VPN ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနဲ့စလိုက်ကြရအောင်။ ။ VPN ဆိုတာ Virtual Private Network ဖြစ်ပြီး၊ ထိုအရာသည် သင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့
Zoom အကြောင်း အပိုင်း၂
ဒီတစ်ခါမှာတော့ အရင်တစ်ခေါက်ကပြောပြဖူးတဲ့ Zoom အကြောင်းရဲ့ ဒုတိယအပိုင်းလေးကို ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ (Zoom အကြောင်း မသိသေးတဲ့ ဘော်ဒါတို့အတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ပြီး ပြန်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။) ပထမအပိုင်း မဖတ်ရသေးတဲ့ဘော်ဒါတွေက ဒီလင့် (https://bit.ly/2K0PUjj ) လေးမှာဝင်ရောက်ပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဘော်ဒါတို့ရေ ဟိုတစ်ခါ fact checking (သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးခြင်း) နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘယ်သတင်းတွေက အမှန်၊ ဘယ်သတင်းတွေကအမှား ဆိုတာကိုစစ်လို့ရမဲ့နည်းလမ်းတွေကို (https://bit.ly/348zKux) ဒီလထဲမှာတင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်နော်။ သတင်းတွေကို အမှန်၊အမှား စစ်လို့ရမဲ့နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ဘယ် page တွေကအကူညီတောင်းပြီး စစ်ခိုင်းလို့ရတာလည်းဆိုတာ ပြောပြသွားပေးမယ်နော်။ သတင်းအတုယောင်တွေကို
ဘော်ဒါတို့ကို application အသစ်လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ app လေးက အခု ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတာနဲ့အမျှ အသုံးပိုဝင်လာမဲ့ app လေးဖြစ်သလို ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်သမျှဗဟုသုတအစုံကိုလည်း လေ့လာလို့ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ အိမ်မှုကိစ္စတွေ၊ အလုပ်ကိစ္စတွေ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ မအားလပ်တာမျိုးဖြစ်နေလို့
ချစ်သူ၊အိမ်ထောင်ဖက်၊မိတ်ဆွေတို့နှင့် မိမိ Password များကို မျှဝေအသုံးပြုသင့်ပါသလား?
မိမိချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဖက်၊ မိမိ၏သူငယ်ချင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့ မိမိ password/PIN code ကိုဘာလို့မမျှဝေသင့်တာလဲ။ မိမိချစ်သူ (သို့) မိမိအိမ်ထောင်ဖက်ကို password/PIN code ​ တွေ share ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် မထင်မှတ်ဘဲ ကွဲသွားတာမျိုး၊ မပေါင်းတော့တာမျိုးဆိုရင်
ZAWGYI VERSION: မိတ္ေဆြဟာ ကြန္ပ်ဴတာကို အခုမွ စတင္အသုံးျပဳတာမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ အမ်ိဳးအစားအမ်ားႀကီးရွိတဲ့ ျမန္မာေဖာင့္ ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးခဲ့ဖူးမွာပါ။ တစ္ခါတစ္ေလ အစည္းအေဝးပြဲတစ္ခုခုမွာ ျမန္မာစာနဲ႔ ေရးထားတဲ့ powerpoint ေတြက ေဖာင့္မတူဘူးဆိုတဲ့ အျဖစ္ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွး​ရတာမ်ိဳးႀကဳံဖူးတယ္မဟုတ္လား။ ဒါမွမဟုတ္
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဘယ်အရာတွေက သတင်းအတုအယောင်တွေလဲ
ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးတဲ့အခါ ဘယ်သတင်းတွေကအမှန်လည်းဆိုတာကို ဝေခွဲရခက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သတင်း​တွေမျှ​ဝေတဲ့အခါ အချက်အလက်တွေမမှန်ပဲ မျှဝေတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိကြပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ မဟုတ်မမှန်တဲ့သတင်းတွေကိုမျှဝေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မသိလို့မျှဝေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရေးကြီးတာကတော့ ကိုယ်ဖတ်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်​တွေက မှန် မမှန်ဆိုတာကိုသိဖို့ပါပဲ။ အဲ့ဒီတော့ အ​သေးစိတ်ထပ်သိရ​အောင် အောက်မှာ​ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းမှားတွေဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အချက်အလက်​များကို ဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
©2022 Internet Bawdar	| Powered by SuperbThemes & WordPress
အွန်လိုင်းပေါ်က ဘော်ဒါအပေါင်းတို့ရေ၊ အင်တာနက်နဲ့ လူမှုကွန်ရက်တွေကို အသုံးပြုရာမှာ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သိကောင်းစရာတွေ၊ ဘော်ဒါတို့ ဘေးကင်းလုံခြုံဖို့ ရှိသင့်တဲ့ ဗဟုသုတတွေနဲ့ သာယာပျော်မွေ့ဖွယ် အင်တာနက်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို ဆွေးနွေးအကြံပေးမယ့် အင်တာနက်ဘော်ဒါတွေ လာပြီနော။